ရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင် ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် (၆) ရပ်ကွက်၊ လမ်း၃၀ (အောက် ဘလောက်)၊ အမှတ် ၇၈ ရှိ ဖက်ရှင်မျက်မှန်ဆိုင်တွင် သြဂုတ်လ ၈ ရက် ည ၇ နာရီ မိနစ် ၄၀ ခန့်က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အလျား ၁၂ ပေ ၊ အနံ ပေ ၄၀ ရှိသော အာစီနှစ်ထပ်တိုက် မြေညီထပ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် မျက်မှန်ဆိုင်၏ ထပ်ခိုးတွင် မတ်ရပ်ပန်ကာ ဖွင့်ထားရာမှ အပူလွန်ကဲ၍ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၁၀ မိနစ်ခန့်သာ လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ပန်ကာတစ်လုံး မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ မီးလောင်မှုကို စစ်ဆေးသည့် မီးသတ်အရာရှိတစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“မီးခိုးတွေထွက်နေတာ နာရီဝက်လောက်ရှိပြီ၊ တစ်လမ်းလုံး ညှော်နံ့တွေချည်းပဲ” ဟု အဆိုပါလမ်းတွင်း နေထိုင်သူ အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မျက်မှန်ဆိုင် မီးလောင်မှုကြောင့် ပိုင်ရှင် ဦးလှဌေးကို(ပ) ၂၄၉/ပုဒ်မ ၂၈၅ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းထံမှ သိရှိရသည်။
၁) တစ်ပါးသူဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးနေပါစေ၊ ကိုယ့်ကို နာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့ပါစေ သူ့ကို ခွင့်လွတ်တတ်ရမယ်။ လက်လွတ်တတ်ရမယ်။ ဒါမှ တကယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ်က ရနိုင်မှာဖြစ်တယ်။
၂) ပျော်ရွှင်ချိန်မှာ ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ ထာဝရမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နားလည်ထားရသလို၊ စိတ်ပျက် အားငယ်ချိန်မှာလည်း ဒီအားငယ်မှုတွေဟာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးလို့ နားလည်ရမယ်။
၅) ကိုယ့်ရဲ့ အသိဥာဏ်ပညာကြားမှာ စိတ်ကြီးဝင်တဲ့ ပေါင်းမြက်တွေ စိုက်ပျိုးမထားပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ဝင့်ဝါတဲ့စိတ်ကြောင့် အသိဥာဏ်တွေ မယုတ်လျော့သွားစေနဲ့။
၆) သူ့ကို မနာလိုဖြစ်တိုင်း ကိုယ့်အတွက် ဘာကောင်းကျိုးမှ မဖြစ်စေဘူး။ သူ့ကို မနာလိုဖြစ်တိုင်း သူ့အောင်မြင်မှုတွေ လျော့သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။
၇) အခွင့်အရေးကို ဖန်တီးသူဟာ ထက်မြက်သူ၊ အခွင့်အရေးကို စောင့်မျှော်သူဟာ တုံးအသူ။
၉) ပုလင်းချင်းအတူတူ ဘာကြောင့် ကိုယ့်ပုလင်းထဲ အဆိပ်တွေ ထည့်ရမှာလဲ? ခံစားတတ်တဲ့ စိတ်ချင်းအတူတူ ဘာကြောင့် ကိုယ့်စိတ်ထဲ မပျော်ရွှင်တာတွေ ထည့်ရမှာလဲ?
၁၂) လောကမှာ ဘယ်တော့မှ သွားပုပ်လေလွှင့် အပြောမခံရတဲ့လူ မရှိသလို အမြဲတမ်းအချီးကျူးခံနေရသူလည်း မရှိဘူး။ ကိုယ်စကားများရင် အပြစ်ပြောမယ်၊ ကိုယ်စကားနည်းရင်လည်း အပြစ်ပြောမယ်၊ ကိုယ်စကားလုံးဝ မပြောဘဲ ဆိတ်ဆိတ်နေရင် လည်း အပြစ်ပြောမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလောကမှာ မပြောမခံရတဲ့လူဆိုတာ မရှိဘူး။
၁၄) လူတွေက ကိုယ့်ကို ကြောက်တယ် ဒါ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ဘူး။ လူတွေက ကိုယ့်ကိုနှိမ်တယ် ဒါ ရှက်စရာမဟုတ်ဘူး။
၁၅) တစ်ခြားသူက ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်က တစ်ခြားသူရဲ့ စကားကိုယူပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာ။
ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ ကုန်းမြင့်ဒေသဖြစ်လို့ မိုးသည်းထန်စွာရွာရင် လျပ်တပြက်ရေကြီးခြင်း(Flash Flood) နဲ့ မြေပြိုခြင်း(Landslides) တွေ အများအပြားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသတိထားစေချင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ရဲ့ မိုးလေ၀သ အခြေအနေကို ဆရာ ဒေါက်တာထွန်းလွင် ကပြောပြထားတာပါ။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာ နိုင်လို့ ရေကြီးခြင်း၊ မြေပြိုခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးသတိထားဖို့ပါ။ အလုပ်တွေ မအားလပ်တဲ့ကြားက ခုလို ပြောပြပေးတဲ့ ဆရာ ဒေါက်တာထွန်းလွင် ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(၈-၈-၂၀၁၃)ရက် ညသန်းကောင်ယံအချိန် တိုင်းတာချက်တွေသိရပါပြီ။
(၈-၈-၂၀၁၃)ရက် ညသန်းကောင်ယံအချိန်(8 AUG 2013 ,18 UTC) မှာတော့ မိုးတိမ်တိုက်ကြီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကိုဖြတ်နေပြီး အဲဒီကတစ်ဆင့် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကို စတင်တိုးဝင်နေပါပြီ။ မူလက ခန့်မှန်းချက် ကလည်း (၈-၈-၂၀၁၃)ညသန်းကောင်ယံမှာ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကို စ၀င်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်အထိတော့ မူလခန့်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပါဘဲ။
(က) ရှမ်းပြည်နယ်မှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာလိမ့်မယ်။
(ခ) ရှမ်းပြည်နယ်ဟာ ကုန်းမြင့်ဒေသဖြစ်လို့ မိုးသည်းထန်စွာရွာရင် လျပ်တပြက်ရေကြီးခြင်း(Flash Flood) နဲ့ မြေပြိုခြင်း(Landslides) တွေ အများအပြားဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသတိထားစေချင်ပါတယ်။
(၉-၈-၂၀၁၃)ရက် ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော် ညောင်တုန်းကို လယ်သမားတွေ အတွက်ဟောပြောပွဲသွားရမှာမို့ နောက်ထပ်သတင်းတွေကိုတော့ ဒီကနေ့ညနေပိုင်း မှ ပြန်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တာ ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုဘဲ ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ပြေတီဦး
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး၊ကော လင်းမြို့နယ်၊ တောင်ကြီးကျေးရွာ အနီးတွင် အမျိုးသမီး တစ်ဦးမျက် နှာတွင် ပြတ်ရှ ဓားခုတ်ဒဏ်ရာများ ဖြင့်သေဆုံးနေကြောင်းသိရသည်။
ကောလင်းမြို့နယ်၊တောင်ကြီး ကျေးရွာအနီးတောထဲတွင် ဇူလိုင် ၂၅ ရက်နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီခန့်က ဥမှင်ကုန်း အုပ်စု၊ တောင်ကြီးကျေး ရွာမြောက်ဘက် ၂မိုင်ခန့်အကွာ တောထဲတွင် ဦးထွန်းသိန်း၏ ဇနီး ဖြစ်သူ ဒေါ်သီတာ ၄၂နှစ်မှာ မြေ ကြီးပေါ်လဲ၍ မျက်နှာတွင် ဓား ခုတ်ဒဏ်ရာ နှစ်ချက်၊ လည်ပင်း နောက်တွင်ပြတ်ရှဓားခုတ်ဒဏ်ရာ တစ်ချက်တို့ဖြင့်သေဆုံးနေကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမျိုးသမီးမှာ ဇူလိုင် ၂၅ရက်၊ နံနက် ၅နာရီကျော်ခန့်က တစ်ဦးတည်း မျှစ်ချိုးထွက်သွားရာ မှဓားဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ရဲတပ်ဖွဲ့ က သဲလွန်စများကိုအခြေခံ၍ စုံ စမ်းကြရာ တောင်ကြီးကျေးရွာ ဇာတိ ဘုန်းကျော်(ခ) မင်းအောင် (၃၀)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမိုးသီး၊တောင်သူ၊ တောင်ကြီးကျေးရွာ၊ ကောလင်း မြို့နယ်နေသူအား မသင်္ကာဖွယ် တွေ့ရှိရသဖြင့် စစ်ဆေးကြရာ ဘုန်းကျော် (ခ) မင်းအောင်မှာ နံနက် ၈ နာရီခန့်ကပြစ်မှုကျူးလွန် ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံထွက်ဆိုခဲ့သည် ဆို၏။
ဘုန်းကျော် (ခ) မင်းအောင်အား ကောလင်းရဲစခန်းမှ (ပ) ၂၅၇/၂၀၁၃ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၀၂အရ အရေးယူ ထားကြောင်းသိရသည်။
မြို့ပတ်ရထား အထူးတွဲ ပေါ်မှ စုံတွဲအချို့၏ မဖွယ်မရာ သတင်း
မြို့ပတ်ရထား အထူးတွဲများပေါ်၌ စုံတွဲအချို့ မဖွယ်မရာပြုလုပ်မှုကို ကြားသိရသော်လည်း တရားဝင်တိုင် ကြားမှု များမရှိသေးဟု မြန်မာ့မီးရထားမှ ရန်ကုန်တိုင်း လက်ထောက်အထွေထွေမန် နေဂျာ ဦးကျော်ကျော် မျိုးက ပြောသည်။
''ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ သူတို့က လက်မှတ်ဝယ်စီး တာဆိုတော့ သွားတားဆီးဖို့ အခက်အခဲရှိနိုင် တယ်။ သိပ်ကြီး လွန်လွန်ကဲကဲ ဖြစ်လာရင် လူမှုရေးအရပဲ ပြောပြမေတ္တာရပ်ခံ ရမှာပေါ့'' ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
မြို့ပတ်အထူးတွဲများပေါ်၌ ရထားရဲ၊ အထူးတွဲ တွဲစောင့်ဝန်ထမ်းနှင့် လက်မှတ် သိမ်းဝန်ထမ်းများ ပါရှိ ကြောင်း အထူး တွဲတွင် ဈေးသည်များပါရှိမှု နည်းပါး၍ စုံတွဲများ စီးနင်းမှုများပြားကြောင်း သိရ သည်။
''အထူးတွဲမှာရော၊ ရိုးရိုးတွဲမှာရော ဒါမျိုးတွေက ရှိနိုင်တာပဲ''ဟု အထက်ပါ အရာရှိက ဆက်လက်ပြောသည်။
မြို့ပတ်ရထားသည် နံနက် ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှ စတင်၍ ထွက်ခွာပြီး ယင်း တွင်လည်း အထူးတွဲပါရှိ ကြောင်းညပိုင်းတွင် နောက်ဆုံးထွက် ရထားမှာ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ဖြစ်ပြီး အထူးတွဲပါရှိသည့် နောက်ဆုံးတွဲမှာ ၉ နာရီ မိနစ်၂ဝ တွင် ဘူတာကြီးမှစတင်ထွက်သည်ဟု မြန်မာ မီးရထားမှ သိရသည်။
''မနက်အစောပိုင်း နေ့ခင်းလူနည်းချိန် ညပိုင်းတွေမှာ အဲလိုကိစ္စတွေ ပိုရှိ နိုင်တာပေါ့''ဟု အထက်ပါ အရာရှိက ထပ်လောင်းပြောသည်။
ဧည့်သည်များ ဝင်ရောက်မှုအား ကောင်းချိန်တွင် ရာဇဝတ်မကင်း သောအမှုအခင်းများကြောင့် မြန် မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်း မထိခိုက်စေ ရန် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များ ဂရု စိုက်ရန်လိုပြီဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီး သွားလာရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက် တာတင်ရွှေက ပန်ဒါဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်သော ရန်ကုန်ဟိုတယ်ဇုန် အလုပ်အမှုဆောင် ပြန်လည်ရွေး ချယ်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်အတွင်း ဖြစ် ပျက်ခဲ့သည့် ဟိုတယ်ပေါ်မှလူပြုတ် ကျသည့်ကိစ္စ၊ လမ်းမတော်ဟိုတယ် တစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အခန်း တွင်းလူသေမှု၊ လှိုင်မြို့နယ် ဟို တယ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံသားသေ ဆုံးမှုနှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်အ တွင်းရှိဟိုတယ်တို့တွင် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ များမှာ မြန်မာ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်း အား အကျည်းတန်စေသည့် ရာ ဇဝတ်မှုခင်းများ ယခုခရီးသွားရာ သီတွင် ထပ်မံမဖြစ်ပေါ်ရန် ဟိုတယ် လုပ်ငန်းရှင်များ စည်းကမ်းတကျ ထိန်းကျောင်းလုပ်ဆောင်ရန် လို အပ်သည်ဟု ဒုဝန်ကြီးကပြောဆို ခဲ့သည်။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာတင်ရွှေ က ''မနှစ်ကဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလာတဲ့ နိုင်ငံတကာခရီးသည် အရေအတွက် စံချိန်တင်တယ် ဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်ကဖြစ်ပျက် သွားတဲ့ ဒီကိစ္စရပ်တွေကြောင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ကျဆင်းလာနိုင် တယ်။ ဒါကြောင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ရှင်တွေ ဟိုတယ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်း အတိုင်း လိုက်နာဖို့လိုတယ်''ဟု ပြောဆိုသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရန် ကုန်ဟိုတယ်ဇုန်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရန်ဝင်း က ''ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအ နေနဲ့ ဒုဝန်ကြီးပြောတဲ့စည်းကမ်း ပိုင်းဆိုင်ရာများကို ဂရုတစိုက်လုပ် ဆောင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဟိုတယ် အခန်းခတွေလဲ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်း ကောက်ခံကြရမှာဖြစ် သလို ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေလဲ စည်းလုံးမှုရှိစွာနဲ့ ယခင်အတွေ့ အကြုံတွေကို သင်ခန်းစာယူဖို့လို ပါတယ်''ဟု ပြောသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် မြန်မာ နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် မြန် မာနိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ပိုင် ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း ၇၅ဝအ ထိရှိပြီး အခန်းစုစုပေါင်း ၂၇၀၀၀ ကျော်အထိရှိနေကာ နိုင်ငံခြား ပိုင်အနေဖြင့် ဟိုတယ်အလုံးပေါင်း ၃၀ အထိရှိကာ အခန်းအရေအ တွက်မှာ ၅၂၀ရ ခန်းအထိရှိနေ ကာ ထပ်တိုးတည်ဆောက်နေ သည့်ဟိုတယ်များ ပြီးစီးသွားပါ က ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း ၃၅၀၀၀ အထိရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက် ရှိခြောက်လတာကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဝင်ရောက်လာ သည့်နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်ခု နှစ်သိန်းကျော်အထိ ရှိနေပြီဖြစ် ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာ ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက် အရ သိရသည်။
ဩစတြေးလျ၏ အချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီး သတင်းအရင်းအမြစ်လွှဲပြောင်းရန် တောင်းဆိုမှု ဆုံးရှုံး
ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ အ ချမ်းသာဆုံးအမျိုးသမီးဖြစ်သူ ဂီနာရီနီဟတ်သည် သူမမိသားစု ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်သော သ တင်းအချက်အလက်များကို ပြန် လွှဲပြောင်းပေးရန် မီဒီယာအဖွဲ့ ကို တွန်းအားပေးမှုရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ ရကြောင်းသိရသည်။ ဂီနာရီနီ ဟတ်သည် သူမ၏သားဖြစ်သူ ဂျွန်ဟန်ကော့နှင့် ဂျာနယ်လစ် စတိဗ်ပန်နယ်စ်တို့ကြားမှ မှတ် တမ်းများ၊ စာများ၊ ဖက်စ်၊ အီး မေးလ်၊ ဥပဒေအကြံပေးမှု၊ စာတို များနှင့်အသံဖိုင်များကို ပြန်ပေး ရန် West Australian သတင်း စာကို တွန်းအားပေးရန် ကြိုးစား ခဲ့သည်။ ဟန်ကော့နှင့်ညီမ ဘီ အန်ကာတို့သည် ၎င်းတို့ အဘိုး ထူထောင်ခဲ့သော ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ ၂၂ဘီလီယံ (အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂ဝဘီလီယံ)တန်ဖိုး ရှိသော သံသတ္တုရိုင်းလုပ်ငန်း အမွေဆက်ခံခွင့်နှင့် ပတ်သက် ပြီး မိခင်ဂီနာရီနီဟတ်နှင့် တရား ရင်ဆိုင်မှုတွင် ပါဝင်နေသည်။
ဂျာနယ်လစ်ပန်နယ်စ်သည် ထိုမိသားစုအရှုပ်ပုံအကြောင်း ဆောင်းပါးရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ ပြီးနောက် ဂီနာရီနီဟတ်က ၎င်း ကို တရားရုံးမှတစ်ဆင့်ဆင့်ခေါ် စာပေးပို့ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏အမှု သည် နှစ်နှစ်နီးပါးကြာခဲ့သော် လည်း ဩဂုတ် ၆ရက်တွင် တရား ရုံးချုပ်မှ သူမ၏အမှုကို ပယ်ဖျက် ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ ''သတင်း စာနဲ့ ဂျာနယ်လစ်သမားတွေအ တွက် သူတို့ရဲ့ သတင်းအရင်း အမြစ်တွေကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေကြောင့် အနိုင်ရရှိခဲ့တာ ပါ။ ဂျာနယ်လစ်စတိဗ်ပန်နယ် ဟာ သူရေးတဲ့ သတင်းအတွက် ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားတွေ ကို ထိန်းသိမ်းခွင့်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို တရားသူကြီးတွေ သိ ခဲ့တဲ့အတွက် အနိုင်ရခဲ့တာပါ''ဟု အယ်ဒီတာဘရက်အမ်စီကာ သီက ပြောခဲ့သည်။
ဂီနာရီနီဟတ်သည် ယမန် နှစ်က သူမ၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သူမအကြောင်း ရေးသားခဲ့သော တခြားဂျာနယ်လစ်တစ်ဦးကို လည်း တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သိရသည်။